bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Devil Sister – Gold Channel Movies
1Season 1 Apr. 18, 2022
Devil Sister Apr. 18, 2022
Episode2Apr. 19, 2022
Episode3Apr. 25, 2022
Episode4Apr. 26, 2022
Episode5May. 02, 2022
Episode6May. 03, 2022
Episode7May. 09, 2022
Episode8 May. 10, 2022
Episode9May. 16, 2022
GCverse တို့ထဲမှာ မောင်လေးတွေရဲ့ ပက်ပက်စက်စက်အကြွေခံရတဲ့ ထက်မြက်တဲ့မမတို့ရှိကြလား။ ဒီလိုမမတွေကြည့်ဖို့အတွက် မတ်မတ်ဥတို့ GC ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ GMMTV ရဲ့ စီးရီးအသစ်၊ မောင်လေးနဲ့မမ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး Devil Sister ပဲဖြစ်ပါတယ်။ GMMTV 2022 ပွဲမှာ စတင်ပွဲထုတ်လိုက်ကတည်းက လူတိုင်းစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Lakorn ဇာတ်လမ်းတွဲပရိသတ်တို့အချစ်တော် မမ Min နဲ့ F4 Thailand မင်းသားချော 99 born မောင်လေး Win တို့ရဲ့ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Irin (Min Pechaya)ဆိုတာက ရက်စက်ပြတ်သားတဲ့ နာမည်ကြီး ဘန်နာဆွန်ပုံနှိပ်တိုက်ပိုင်ရှင်ပါ။ ဒီခေတ်အခေါ်ဆို ထက်မြက်တဲ့မမပေါ့။ ဒီမမဟာ အချစ်ဝတ္ထုတွေမကြိုက်ဘူး၊ လာဗင်ဒါကိုမုန်းတယ်၊ ရုံးမှာဆိုရင် ကြောက်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ ဝန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာ နတ်ဆိုးမမလို့နာမည်ကြီးတဲ့သူ။ ဒီလိုမမမျိုးရဲ့ ဘေးအိမ်မှာ Namcha (Win Metawin) ဆိုတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ချောချောလေးတစ်ယောက် ရှိလို့နေပါတယ်။ မမရဲ့ဘေးဆိုတာက အိမ်တင်မကပါဘူး၊ မမနဲ့ တွဲပါတွဲခဲ့ဖူးတဲ့အဆင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အသက်ကကွာနေတော့ လူမသိအောင် ခိုးတွဲခဲ့တဲ့အဆင့်ပေါ့လေ။
အတိတ်တစ်ချိန်တုန်းက မမ Irin ဟာ မောင်လေး Namcha ကို အကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ ရုတ်တရက်လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး အခုထိ Namcha လေးဟာ မမကိုပြန်ရဖို့အတွက် အမြဲကြိုးစားနေခဲ့ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မမကိုပြန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ခရီးလမ်းဟာတော့ ကြမ်းတမ်းလို့နေပါတယ်။ Namcha ကိုကြိုက်နေတဲ့ Irin ရဲ့ညီမ Inn လည်းရှိနေသလို Irin တို့ မိသားစုကလည်း မိသားစုရှေ့နေ Pod နဲ့ မမကို နေရာချဖို့ ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့。。。
မမ Irin ကရော ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မောင်လေးကို ဘာလို့ ရက်ရက်စက်စက်အသည်းခွဲခဲ့ရတာလဲ။ မောင်လေး Namcha တစ်ယောက် သူ့အချစ်ဦး မမကို ပြန်ရနိုင်ပါ့မလား၊ မမရဲ့စိတ်ကရော မောင်လေးဆီပဲပြန်လည်မလား၊ ရှေ့နေလေးကိုပဲချစ်သွားမလား စတာတွေကိုတော့ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါညမှာ ပြသသွားမယ့် Devil Sister ကားလေးထဲမှာ စောင့်မျှော်ပေးပါဦးလို့ မတ်မတ်ဥက မှာချင်ပါတယ်နော်။
Original title Devil Sister
First air date Apr. 18, 2022